Malawi: ny minisitry ny fanabeazam-pirenena dia manolotra ny fampidirana ny fampianarana fandriam-pahalemana any an-tsekoly - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Aogositra 24, 2021 Vaovao sy hevi-dehibe, Policy 0
Minisitry ny fampianarana sivily sy ny firaisam-pirenena, Timothy Pagincihi Mtambo. (Sary: Nyasa Times)
(Navoaka avy amin'ny: Nyasa Times. 6 aogositra 2021)
Nosoratan'i Watipaso Mzungu
Ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sivily sy ny firaisambe nasionaly Timothy Pagincihi Mtambo dia nangataka tamin'ny mpamorona fandaharam-pampianarana ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa mba hijery bebe kokoa ny fampiharana ny Fanabeazana ny fandriam-pahalemana amin'ny ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa.
Nilaza i Mtambo fa ny fampidirana ny Fandriam-pahalemana ho an'ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa dia afaka manampy amin'ny famahana ny fifanolanana vokatry ny fifanolanana amin'ny fananan-tany, ny fifanolanana eo amin'ny fitondrana, ny tsy fitovian'ny fivavahana ary ny karazana fampielezan-kevitra politika isan-karazany.
Niresaka tao Blantyre ny minisitra ny alakamisy teo raha nanokatra ny atrikasa fiaraha-miasa nataon'ny Firenena Mikambana Malawi (UN Malawi) / akademia izy.
Ny fiaraha-miasa UN Malawi / Academia Collaboration dia manamarika ny fiantombohan'ny fifandraisana stratejika sy ara-piasa eo amin'ny UN Malawi sy ireo manam-pahaizana tsara indrindra sy mamiratra indrindra ao Malawi.
Niaiky i Mtambo fa niatrika ady mafy i Malawi mba hialana amin'ny fifanolanana izay nihanahazo vahana ny herisetra nandrahona ny fandriam-pahalemana izay efa azon'i Malawi hatramin'ny fahaleovantena.
Nilaza izy fa mifanohitra amin'ity sehatra ity ny governemanta Malawi, miaraka amin'ny fanohanan'ny UN Malawi, nanomboka ny fomba fametrahana rafitra andrim-panjakana izay hiantohana ny fifanolanana alohan'ny hitomboan'ny herisetra.
“Ity dingana ity dia nitohy nanomboka ny taona 2012 ka misy volavolan-dalàna hametrahana ny rafitra efa vonona hapetraka ao amin'ny Parlemanta. Ivon'ireo asa rehetra amin'ny fametrahana rafitra andrim-pirenena ho an'ny fananganana fandriam-pahalemana izany ny filàna ny fananganana fahaiza-manao eo amin'ny fiarahamonina hamahana ny fifanolanana amin'ny fomba fiaraha-miasa », hoy i Mtambo.
Niarahaba ny Firenena Mikambana Malawi ho mpiara-miasa akaiky amin'ny governemanta izy amin'ny fananganana hery nasionaly ho an'ny fandriampahalemana maharitra any Malawi.
Nambarany ihany koa fa ny akademia dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampahalalana ny lalàm-panjakana, ny politika ary ny kabary ampahibemaso.
“Ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny UN Malawi sy ny akademia, noho izany, dia tsy mahasoa an'ireo izay tonga eto ihany ankehitriny, fa ambonin'izany rehetra izany, ho tombontsoa ho an'i Malawi renintsika.
"Ny governemanta Tonse Alliance dia nanao laharam-pahamehana sy am-pahamehana ny fampiroboroboana ny fiaraha-monina milamina sy ny firaisam-pirenena eo amin'ny vahoaka Malawiana," hoy i Mtambo nanamafy.
Ny solontena iray avy amin'ny UN Malawi, Maria Jose Torres Macho, dia nivoady ny fahavononan'ny fikambananany hanohana ny ezaka nasionaly hampiroborobo ny fandriampahalemana sy ny fandriam-pahalemana ao Malawi.
Nasongadin'i Macho fa ny fandriampahalemana sy ny firaisankina dia zava-dehibe amin'ny fikatsahana ny fanovana ara-tsosialy sy toekarena.
# fanavaozana ny fandaharam-pianarana
Fanavaozana ny fanabeazana ao Myanmar
Jona 1, 2017 Policy, Research 0
Ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ho toy ny maso ivoho ny fanovana ara-tsosialy tsara dia manan-danja tokoa ao Myanmar, indrindra mandritra ity fotoan-tsarotra ity. Ny politikan'ny fanabeazana vaovao eto amin'ny firenena dia tsy tokony hampifandraisina amin'ny ahiahy momba ny fianarana sy ny fahalalana ao an-tsekoly ihany fa ny ady anatiny. Ny fahafahan'izy ireo mampitombo na manatsara ny fifanolanana dia mila dinihina tsara ihany koa. [tohizo ny famakiana…]
Fandaharam-pampianarana manerantany miaraka amin'ny atiny fanabeazana fandriam-pahalemana ilaina ny ora (India)
Aogositra 18, 2020 Opinion, Policy 2
Dr. Swaleha Sindhi sy Dr. Adfer Shah dia mihevitra ny Politika Fanabeazam-pirenena Vaovao (NEP) ho toy ny fotoana ahafahana manao fanabeazana ny fandriam-pahalemana. [tohizo ny famakiana…]
Meksika: hampiditra ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana ho lohahevitra vaovao any amin'ny sekoly ny governemanta
Jolay 4, 2019 Vaovao sy hevi-dehibe, Policy 0
Esteban Moctezuma, sekreteran'ny fanabeazam-pirenena dia nilaza fa ny taranja sivika dia hampianarina any amin'ny sekoly meksikanina ary ny fanovana hafa dia hampiharina amin'ny fandaharam-pianarana mba hampidirana ny fampiroboroboana ny soatoavina, ny fahalalam-pomba, ny kolontsain'ny fandriampahalemana, ny firaisankina iraisampirenena ary ny fanajana ny olombelona zo. [tohizo ny famakiana…]